Dhalada Qurxinta, Dhalada Xayawaanka, Dhalo Buufin - Kechang
2 oz oo dhalada jillaab ah oo cad oo leh 20-415 qoorta dhammaatay
9 oz dhalo caag ah oo dabiici ah oo PP leh 28-4 ...
Style New 3-5ml cad dabiiciga dabiiciga ah PE dabada siilka d ...
17 oz HDPE cad oo haysta dhalo caag ah oo buufiyo leh ...
0.3 0.5 oz HDPE dhalo dhibic fidsan oo fidsan leh ...
0.5 oz (15ml) cad PETG dhalada dhibicda oval dhibic ...
2 oz cad PETG dhegyada sare weelka dhalada wit ...
100 oz dhalada caagadaha HDPE oo caag ah oo leh 40-4 ...
17 oz casaan PETG dhalo dareere labajibbaaran oo leh 28-41 ...
2 oz dhalada PET hexagon cad oo leh qoorta 24-410 ...
2 oz dhalada cad ee PP oo leh 34-400 qoor f ...
4ml PE tuubo dabiici ah oo siilka ah
7 oz oo buluug ah PET dhalo wareegsan oo leh 38-410 qoorta dhammaatay
7oz （207ml） PET cagaaran Pharmaceutical caaga Vitamin Dhalo Pill Pill Capsules Dhalo.Waa miisaanka culeyska, iska caabbinta saamaynta, caddaynta daadinta wanaagsan, sifooyinka kiimikada deggan.OEM Service: daabacaadda shaashadda xariirta calaamadda, Warqadda warqadda, calaamadda caagga ah, duubista. Dhalada dawada caagga ah oo madhan oo qaabaysan oo madhan. dhalada daawada qaarkeed waxay u dulqaadan kartaa -80ºC ilaa 120ºC.
1.7 oz oz HDPE madow dhalo fidsan oo leh 12-410 qoor ...
Dhaladayada cad cad ee 100ml ah waxay ka samaysan tahay wax HDPE ah. 100% nooc cusub oo tayo sare leh.Madee caag ah, dib loo isticmaali karo, dildilaaca u adkaysta oo xaalufsan.Waxa la dhaqi karo oo la buuxin karo. Cabbirro kala duwan iyo qaabab kala duwan ayaa la dooran karaa.Mini naqshad, aad loo qaadi karo, aad ugu habboon safarka, boorsooyinka gacanta iyo ciidaha. Adeegga OEM: Daabacaadda shaashadda xariirta Logo, Calaamadda Waraaqda, Calaamadda caaga ah, duubista. Cabbirka yar ayaa ku habboon socdaalka ama kaydinta iyo abaabulka agagaarka guriga. Naqshad daboolid labalaab ah, si adag loo shaabadeeyey si looga hortago daadinta iyo buuxinta baahiyaha kaydintaada.
Faahfaahinta badeecadda Dhaladayada 17 oz /500ml oo dareere ah ayaa ka samaysan walxaha PETG si ay u hesho muuqaal iyo dhammaystiran oo wanaagsan.
Faahfaahinta badeecada Dhalooyinkayaga 2 oz /60ml waxay ka samaysan yihiin walxaha PP si ay u noqoto caagad wanaagsan iyo dhammaystirka.
ku soo dhawow shirkadeena
Shirkadeena waxay soo aruurisay tiro badan oo shaqaale cilmi-baaris cilmiyeed iyo shaqaale maareyn ah oo tayo sare leh, waxay dhistay shaybaar tijaabo oo si fiican u shaqeynaya. Horumarinta dhaqaalaha suuqa, iyada oo lagu saleynayo badeecooyin tayo sare leh, adeeg aad u fiican iyo sumcad wanaagsan, waxaan si wanaagsan u helnay macaamiisha.